Wayne Rooney oo si weyn u taageeray Mourinho, isaga dhinaca kale fariin muhiim ah u diray ciyaartoyda Man United – Gool FM
“Waa macquul inaan ku soo baxno Camp Nou” – Gennaro Gattuso
Tababare Quique Setién oo ka hadlay barbarihii ay xalay la galeen Napoli, muxuuse ka yiri kaarkii casaanka ahaa ee Arturo Vidal?
Manchester United oo xiddig ka tirsan Juventus saxiixiisa kula tartamaysa Kooxda Arsenal
Dhallinyarada reer Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka caawa u dhexeeya Real Madrid iyo Man City ee UCL
Wayne Rooney oo si weyn u taageeray Mourinho, isaga dhinaca kale fariin muhiim ah u diray ciyaartoyda Man United
Dajiye October 9, 2018
(Manchester) 09 Okt 2018. Weeraryahankii hore kooxda Manchester United ee Wayne Rooney ayaa si weyn u taageeray tababare Jose Mourinho, kadib markii ay Red Devils qaab ciyaareed niyad leh kaga bilaabatay xili ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Wayne Rooney ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay wargeyska “The Sun” ee dalka England wuxuu kaga hadlay xaalada macalinkiisii hore ee Jose Mourinho.
“Jose Mourinho mas’uul kama ahan natiijooyinka xun ee kooxda Manchester United xili ciyaareedkan”.
Rooney ayaa hadalkiisa intaas ku daray in Manchester United ay u baahneyd ciyaartoy mideysan ee si wada jir ah u shaqeeya, si ay ugu soo laabtaan wadada saxda ah islamarkaana ay helaan natiijooyin wax ku ool ah.
“Macalinka wax badan ayuu qaban karaa, lakiin waa in isla markaas ay ciyaartoyda ay kusoo bandhigaan garoonka wax walba ee awoodoodu gaarsiisan tahay, laakiin Mourinho ayaa noqday bar-tilmaameedka u sahlan qof walba”.
“Si wanaagsan ayaan u garanayaa Jose Mourinho, waxa loo baahan yahay ayaa ah in ciyaartoyda ay garabkiisa istaagaan, si uu u fiicnaado”.
Si kastaba kooxda Manchester United ayaa lasoo kulantay guuldarooyin dhowr jeer, laakiin waxay sameeyeen soo laabasho cajiib ah kulankii Sabtida ee Newcastle, kadib marka ay kasoo laabteen 2 gool isla markaana ay guul ku gaareen 3-2 kulankii Premier League-ga ee ka dhacay garoonka Old Trafford.
Liiska Xiddigaha ugu heysta tuurista FREE KICK yada Premier League waqti xaadirkan iyo kuwii hore oo la soo saaray....(Ronaldo kaalintuu ku jiraa, Yaase Waqtigan ugu heysta?)
Yaa ugu CAD CAD inuu ku guuleysto Ballon d’Or???.....(Messi oo meel xun laga riday iyo Ronaldo oo…)